Evernote na-ejikọ Googe Drive na beta maka gam akporo | Gam akporosis
Evernote na-ejikọ Google Drive na beta maka gam akporo na Chrome
Nkwado maka ụfọdụ ọrụ site na ụfọdụ ngwa dị mkpa maka inwe ike inweta ọtụtụ n'ime ya nye onye na-ahụ maka idetu ihe ma chọọ iji ọrụ nchekwa igwe ojii mee ka ha mekọrịta otu a. Yabụ, nkebiokwu ahụ bụ na ịdị n'otu bụ ike dabara na ngwa na ọrụ ụfọdụ.
Nke a bụ ihe na-eme na Google Drive na Evernote ndị gbakọtara ka ndị ọrụ wee nwee ike ijide, hazie ma rụkọta ọrụ n'ụzọ ka mma. Mwekota a ga - enye ndị ọrụ ohere ịnweta faịlụ Drive site na Evernote. Nke a pụtakwara na ị ga-enwe ike ịchekwa ụfọdụ nnukwu faịlụ na Evernote site na iji nchekwa ozo nke Google Drive nyere gi.
Ndị ọrụ nwere ike inyocha faịlụ ndị echekwara na Google Drive site na akwụkwọ ndetu gị na Evernote. Na nchikota a, ndị ọrụ Evernote ga-enwe ike itinye ụdị faịlụ ọ bụla na Draịvụ na ndetu ha na-ahapụghị Evernote. A ga-ewelite mgbanwe na faịlụ dị na Google Drive na akpaghị aka na Evernote. Tupu ịhapụ beta a, ndị ọrụ nwere ike iji njikọ URL na faịlụ ma gbanwee n'etiti ngwa abụọ ahụ.
Mmelite na-eweta ya ntule thumbnail na ahụmahụ bara ọgaranya mgbe ị na-agbakwunye faịlụ. Yabụ, ọ bụrụ na isonyere beta, ị ga-enwe akara ngosi Google Drive na ogwe ngwaọrụ Evernote maka nnweta ọsọ ọsọ dịka egosipụtara na vidiyo metụtara ya.
Mwekota nke beta dị naanị na Chrome na gam akporo ọ ga-abịa n'oge na-adịghị anya na ntanetị ndị ọzọ ebe Evernote guzobere. Ihe ohuru a gha enye nkpuru nye ihe Evernote iji nwee ike igbati njirimara ya na igwe ojii enwere ike ihu ya na Google Drive. Ọ bụkwa ihe na-adọrọ mmasị na ụmụ okorobịa nọ n’azụ ngwa a ka ha nwee ndetu, wepụtara ụdị ọhụrụ ọzọ na-atọ ụtọ otu izu gara aga. Nọgide n'ụzọ ahụ.
Evernote: Onye nhazi ndetu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Evernote na-ejikọ Google Drive na beta maka gam akporo na Chrome
[Mgbọrọgwụ] Otu esi akpaghị aka na mpịgharị nke ihuenyo nke gam akporo anyị
HERE Maps na-amalite site na uzo uzo uzo uzo ugbua na gam akporo